आशिफसँग ‘डामाडोल’मा रोल माग्दै रिमा ! (भिडियो) « Ramailo छ
आशिफसँग ‘डामाडोल’मा रोल माग्दै रिमा ! (भिडियो)
यस वर्षको हिट फिल्म ‘दुई रुपैयाँ’ टिमले अर्को वर्ष ‘डामाडोल’ बनाउँदैछ । अशिम शाहले निर्देशन गर्ने फिल्ममा निश्चल बस्नेत र आशिफ शाह मात्र पक्का भएका छन् । नायिकाको कोटा खाली छ । ‘डामाडोल’मा को होलिन् त नायिका ? यो रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
नायिकाको कोटा खाली भैरहंदा नायिका तथा मोडल रिमा विश्वकर्माले ‘डामाडोल’मा रोल मागेकी छन् । नेपाल आइडल २ का को होस्ट आशिफ शाहसँगको रमाईलो कुराकानीमा ठट्यौली शैलीमा रिमाले आशिफसँग डामाडोलमा हिरोइनको रोल माग गरेकी हुन् । तर रिमाको आग्रहमा आशिफले भने कुनै जवाफ दिएनन्, उनी मौन बसे । उनले फिल्मको लागि कुनै पनि नायिका तय नभएको समेत खुलाए ।
फिल्म वृत्तमा भने नायिका स्वस्तिमा खड्का ‘डामाडोल’मा अनुबन्धित भएको चर्चा छ । ‘दुई रुपैयाँ’ मा निश्चल, स्वस्तिमा र आशिफ नाचेको कुटुमा कुट गीत यस बर्ष सर्वाधिक हिट भयो । के निश्चल र आफिशले स्वस्तिमा हटाएर ‘डामाडोल’मा रिमालाई राख्लान् त ?